क्रिकेट टोली स्वदेश फर्कियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » क्रिकेट टोली स्वदेश फर्कियो
क्रिकेट टोली स्वदेश फर्कियो
काठमाडौँ। नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध ऐतिहासिक एकदिवसीय क्रिकेट शृङ्खला खेलेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले नेदरल्याण्ड्ससितको एकदिवसीय खेलमा नेपालको प्रदर्शन राम्रो रहेको बताए । पहिलो खेल कमजोर ब्याटिङ्का कारण गुमाए पनि दोस्रोमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको उनले बताए। नेपाली क्रिकेटको आगामी यात्रा एशिया कप भएकाले त्यसमा अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे।
एसीसी एशिया कप छनोट प्रतियोगिता आगामी भदौ ११ देखि २२ गतेसम्म मलेसियामा हुँदैछ। नेपाली टोली बेलायतको लर्ड्समा त्रिकोणात्मक टी–२० शृङ्खला र नेदरल्याण्ड्समा दुई खेलको एकदिवसीय शृङ्खला खेलेर स्वदेश फर्किएको हो।
नेदरल्याण्ड्स जानुअघि नेपाली टोलीले बेलायतको लड्र्समा आयोजक मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब ९एमसिसी०सँग टि–२० खेलेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल विजयी भएको थियो। नेदरल्याण्ड्ससँगको एकदिवसीय शृङ्खलामा पहिलो खेलमा नेपाल ५५ रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा एक रनले विजयी भएको थियो।
यसैबीच नेपाली टिमका युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग ९सिपिएल० खेल्न वेस्ट इण्डिज गएका छन्। नेदरल्याण्ड्सबाट उनी वेस्ट इण्डिज गएका हुन्। सन्दीप सिपिएल टिम सेन्ट किट्स एण्ड नभिस पाट्रिओट्ससँग आवद्ध भएका थिए। सिपिएल यही साउन २२ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म हुनेछ। सिपिएलमा ६ टिम सहभागी हुनेछन्।